Shirkadaha ugu mushaarooyinka badan ayey raggu ku badan yihiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkadaha ugu mushaarooyinka badan ayey raggu ku badan yihiin
La daabacay onsdag 5 november 2014 kl 15.00
Nin, deggan magaalo wayn, oo laga yaabo inuu ka howl-galo bangiga ayaa ah cidda ku guuleeystay kor u kaca mushaarooyinka. Iyada oo marka ugu horreeysa ey kaalinta 23 soo geleyaan shirkadaha ey ka howl-galaan badanaa haweenku sida dukaanka Ikea ee nawaaxiga Älmhult.
Shirkadda wararka Iswiidhen ee TT ayaa iyada oo la kaashaneeysa shirkadda Creditsafe daraeeysay shirkadaha safka hore kaga jira kor u kaca mushaarooyinka ee dalka. Kuwaasina oo ey ugu sii horreeyaan qaar ka mid ah shirkadaha dhaqaalaha ee ka howl-gala magaalada Stockholm.
Liiska mushaarrooyinka ayey ugu sarreeyaan howl-wadeennada shirkadda daarta dhaqaalaha ABG Sundal Collier oo ka howl-gala magaalada Stockholm, kuwaasina oo isku celcelin qaata mushaarrooyin gaarsii-san 1 530 000 oo kronka iswiidhishka ah sannadkii. Iyada oo uu farqi aad u ballaaran u dhexeeyo kolka loo barbar-dhigo shirkadaha ugu mushaarrooyinka wanaag-san ee tusaale ahaan degmada Arjeplog oo dhacda waqooyiga dalka Sweden, shirkadda maqaayadaha Tjintokk oo isku celcelin ey howl-wadeennadoodu qaataan sannadkii 279 000 oo koronka iswiidhishka ah.
Shirkadaha ey raggu ku badan yihiin ayaa aad ugu sarreeya mushaarooyinka ey howl-wadeennadu qaataan. 32 ka mid ah 268 degmo ee tira-koobkan qaybta ka ah ayey kuwooda ugu mushaarooyinka sarreeya ey in bar ka badan ka howl-galaan haween, waana goobaha shaqada ee maqaayadaha laga cunteeyo iyo goobaha dar-yeelka caafimaad badankood.